Boqorka Badbaadada: Alisson Becker Oo Noqday Goolhayaha Ugu Badbaadinta Badan Shanta Horyaal Ee Waaweyn Iyo Xogta Laga Ururiyey Rikoodhkiisa – Cadalool.com
Boqorka Badbaadada: Alisson Becker Oo Noqday Goolhayaha Ugu Badbaadinta Badan Shanta Horyaal Ee Waaweyn Iyo Xogta Laga Ururiyey Rikoodhkiisa
Goolhayaha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Alisson ayaa noqday midka ugu wanaagsan guud ahaan shanta horyaal ee waaweyn ee qaaradda Yurub.
Goolhayaha reer Brazil ayaa tan iyyo markii Liverpool ay £67 milyan kaga soo qaadatay kooxda Roma, waxa uu sameeyey badbaadin aan caadi ahayn iyo bandhig ciyaareed cajiib ah oo ka dhigtay midka ugu wanaagsan shanta horyaal ee Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga iyo Ligue 1 oo kala ah dalalka Ingiriiska, Spain, Talyaaniga, Jarmalka iyo Faransiiska.
Alisson oo xulka qaranka Brazil u ciyaaray 34 jkulan ayaa muujiyey inuu u qalmo lacagta badan ee ay Liverpool kasoo bixisay, waxaana uu noqday goolhayaha badbaadinta ugu badan sameeyey dhamaan goolhayeyaasha shanta horyaal ee saftay in ka badan 15 kulan oo horyaallada ah.
Goolhaye Alisson ayaa waxa uu kulan kasta badbaadiyaa 84.2 boqolkiiba kubbadaha loola tago, waxaana laga dhaliyey tiradii ugu yarayd oo ah -0.47 boqolkiiba kulan kasta.
21 kulan oo horyaalka Premier League ah, waxa laga dhaliyey 10 gool oo kaliya taas oo ka dhigan in kala badh wax ka badan uu shabaqiisa nadiif ka dhigtay, waana sababta ay Liverpool hoggaanka Premier League ugu raaxaysanayso kaligeed.
26 jirkan oo sheegay inuu iska diiday dalab qaali ah oo uu ka helay Chelsea xagaagii, ayaa waxa kaalinta labaad ugu jira goolhayaha kooxda reer France ee Nice, Walter Benitez oo haysta rikoodh ah inuu badbaadiyey boqolkiiba 81.5 kubbadihii goolkiisa lagu weeraray, waxaana saddexaadka fadhiya goolhayaha Atletico Madrid ee Jan Oblak oo haysta rikoodh ah 80.4 boqolkiiba.
Kaalinta afraad waxa ku jira goolhayaha Inter Milan, Samir Handanovic oo ka sare maray Thomas Vaclik iyo Fernando Pacheco, halka Peter Gulacsi, Yassine Bounou iyo David Soria ay soo afjareen liiskan.
Halkan kaga bogo xogta sagaalka goolhaye ee ugu wanaagsan